Apple Watch Edition ho an'ny bibikely any Shina | Avy amin'ny mac aho
Mandritra ny Espaniôma dia miandry ny Apple Watch isika, any Sina iray tapitrisa dia mividy Editions roa amin'ny alikany
Iray volana mahery kely taorian'ny nanombohan'ny Apple Watch an-tapitrisany izay amidin'ny Apple tamin'ny 10 Mey lasa teo amin'ny tompony, dia betsaka ny vaovao Afaka namaky mifandraika amin'ity vokatra vaovao ity avy amin'ny an'i Cupertino izahay.
Eto Espana, toy ny any amin'ny firenena maro hafa, mbola miandry ny daty fandefasana isika, izay mety ny 8 Jona, amin'ny WWDC amin'ity taona ity dia hahafantatra zavatra iray isika. Na izany aza ity lahatsoratra ity Tsy mifantoka amin'ny daty fanombohan'ny Apple Watch any Espana izy io.
Ny zava-misy dia rehefa nandeha ny andro dia fantatra ny mampiavaka ireo maodely Apple Watch samihafa misy. Ny voalohany nahatratra ny mpampiasa dia ny maodelin'ny alimina sy vy misy fehy mahazatra, izany hoe ny fingotra sy ny milaney. Fotoana fohy taorian'ny nahitanao ireo singa vitsivitsy misy fehy vita amin'ny hoditra sy vy ary efa, dimy ambin'ny folo andro taty aoriana, iray amin'ireo tariby vy volo mainty voaravaka fomba Mac Pro.
Na izany aza, tsy nisy dian'ireo maodely fanontana izay milaza fa i Apple dia singa voafetra no nanamboarana azy ary saika amidy tamin'ny andro voalohany tany Chine ny rehetra. Andro vitsy lasa izay ny vadinay Jesús Arjona nasehony anay ny unboxing voalohany an'ny Apple Watch Edition amin'ny volamena mavo, izay mpampiasa iray manana fonon-tànana vita amin'ny vinyl roa dia nampiseho ny kalitaon'ny fonosana nanolorana azy.
Ity maodely Apple Watch ity dia tsy misy amin'ny maro ary ny vidiny dia $ 10.000 ka hatramin'ny $ 17.000 miankina amin'ny maodely sy ny fiafarany. Hatreto dia normal daholo ny zava-drehetra, fa raha mieritreritra ianao fa efa nahita be dia be rehefa nahita olona nanolo-tena hametraka ny Apple Watch, manapaka azy, milentika anaty rano sns. lasa lavitra lavitra ilay mpampiasa resahintsika anio.
Mety ho sangisangy iray ihany io fa araka ny bilaogy Time dia toa ilay alika manao roa, raha roa, Apple Watch Edition amin'ny volamena rose An'ny miliardera sinoa iray izay nandefa tao amin'ny tambajotra sinoa Weibo mitovy amin'ny Twitter any Shina ny sarin'ny alikany mitafy ny Apple Watch izay nifanakalozanay hevitra.
Araka ny efa fantatsika, ny kaonty Weibo dia nosokafana tamin'ny anaran'ny alika ary ao no ahafahantsika mamaky ny fomba, raha adika amin'ny teny sinoa, dia miantso mafy ilay alika fa manana Apple Watch vaovao izy. Tokony hanana efatra, iray isaky ny tongotra izy, fa mba ho "mpanankarena vaovao" dia mijoro miaraka amin'ny roa izy.
Raha nanana andro alika ianao dia antenaina fa ity vaovao ity farafaharatsiny mba nahatonga anao hitsiky tamin'ny fahafantarana fa mety marina na tsia ity tantara ity. Ahoana raha samy manana anao izahay ary mazava ho azy fa irinay ny Apple Watch ho tonga indray avy hatrany any Espana mba hahafahany mahazo iray ... raha ny ahy dia vy vy 42 mm misy fatorana Milanese ary fehikibo fingotra mainty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Mandritra ny Espaniôma dia miandry ny Apple Watch isika, any Sina iray tapitrisa dia mividy Editions roa amin'ny alikany
Heveriko fa tsy an'ny alika izy ireo ary milalao fotsiny izy, azoko natao koa ny nametraka ny ahy tamin'ny alikako ary naka sary.
Izahay André ihany no mieritreritra. Etsy andaniny… Tsara vintana sahady ianao fa manana Apple Watch! Mirary ny soa indrindra!
Ahoana ny fanararaotana ny Force Touch an'ny Apple Watch anao
Foxconn dia mikasa ny hanokatra orinasa telo any India